Porn Internet oo Saameyn ku leh Maskaxda - Abaabulka Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Asaasiga Maskaxda Porn-ka internetka wuxuu saameynayaa Maskaxda
Haddaynu ku dhalan lahayn buug tilmaam ah oo ku saabsan waxa na saxaaya! Runtii way ku caawin laheyd mid leh cutub ku saabsan sida lebbiska internetku u saameeyo maskaxda. Warka wanaagsani waa, in aan la soo daahin in wax la barto. Waa arrin dhib badan, laakiin sida baabuurka oo kale, maahan inaan wax walba ka ogaano mashiinka si aan u baranno sida loogu wado si ammaan ah.
Pornography internetka maaha sidii loola jeeday waagii hore. Waxay u saameysaa maskaxda si aad u badan oo toos ah oo suuxsan. Waxaa loogu talagalay si gaar ah iyadoo la adeegsanaayo farsamooyinka casriga ah ee casriga ah si loo bedelo fikradaha iyo dabeecadeena. Farsamooyinkani waxay ka dhigi karaan dadka isticmaala daroogada waxayna u horseedaan inay kor u qaadaan noocyada dheeraadka ah ee porno.
Fiidiyowyada Hordhaca ah
Afartaan fiidiyow ee gaagaaban ayaa sharxaya sida. Waxay dembiga ka saaraan arrinta iyagoo sharraxaya sida maskaxda u nugul ay u tahay taranka madaddaalada-kicinta badan. Tani waxay si gaar ah u khusaysaa maskaxda dhalinyarada. Warshadaha kumbiyuutarka doolar ee porn-ka ayaa kaliya xiiseynaya faa'iidooyinka ee maaha saameynta dhinaca maskaxda iyo jirka ee isticmaalayaasha.
Tani midda koowaad waa daqiiqado ah 5 waxaana kujira wareysi lala yeesho qaliinka maskaxda oo ku saabsan saameynta galmada Waa qeyb ka mid ah dukumenti uu sameeyay TV-ga New Zealand.
Xilligan xariifka ah ee 2 animation sharaxaa saameynta galmada iyo gardarrada xiriirka.
Professor-ka cilmi-nafsiga bulshada ee Stanford Professor Philip Zimbardo wuxuu eegay 'qabatinka arousal' ee 4 daqiiqo TED hadalka loo yaqaan "Diidmada Guys".
"Imtixaanka Porn Porn"Waa daqiiqad 16 hadal TEDx hadal macalin hore ee sayniska iyo qoraaga Gary Wilson. Waxay ka jawaabeysaa caqabada ay soo bandhigtay Zimbardo. Waxaa la arkay wax ka badan 12.6 million jeer on YouTube waxaana loo turjumay luuqadaha 18.
Gary wuxuu ku cusbooneysiiyay hadalka TEDx soo bandhigid dheer (1 saac 10 daqiiqo) oo loo yaqaan "Maskaxdaada on Porn- Sidee Porno Internet u Dhacaan Maskaxdaada“. Kuwa doorbidaya buug soo jiidasho leh oo wargelin leh boqolaal sheekooyin soo kabasho ah iyo talooyin muhiim ah oo loogu talagalay joojinta porno arag Gary Maskaxdaada on Porn: Farshaxanka Internetka iyo Sii-saarka Soogalootiga oo laga heli karo waraaqo, kuxirsanaan ama maqal-dhageysi. Waxa uu sharxayaa fikradaha muhiimka ah ee aad u fiican podcast (Daqiiqado 56).
Qeybtaan 'aasaaska maskaxda', Hay'adda 'Reward Foundation' waxay kugu qaadaysaa booqasho maskaxda aadanaha ah. Waxaad ka eegi kartaa halkan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan aasaasiga ah anatomy maskaxda oo ay soo saartay Jaamacadda McGill. Maskaxdu waxay u soo baxday inay na caawiso sii noolaan iyo horumar. Miisaanka qiyaastii 1.3kg (ku dhowaad 3lbs), maskaxda bini'aadamka waxay ka kooban tahay kaliya 2% miisaanka jirka, laakiin waxay isticmaashaa qiyaastii 20% tamarteeda.
Si aad u fahamto sida maskaxdu u kobcisay inay ka shaqeyso guud ahaan, fiiri Horumarka horumarinta maskaxda. Marka xigta waxaan arki doonaa sida ay u wada shaqeeyaan qeybaha iyadoo la sahaminayo mabaadi'da neuroplasticity Taasi waa sida aan wax u baranno oo aan u baranno caadooyinka oo ay ka mid yihiin horumarinta mukhaadaraadka. Waxaan sidoo kale eegeynaa sida maskaxdu ay ula xiriirto soo jiidashada, jacaylka iyo jinsiga iyada oo ugu weyn neurochemicals. Si loo fahmo sababta naloogu wado abaalmarintan, waa muhiim in laga ogaado dhiirigelinta maskaxda ama nidaamka abaal-marinta. Maxay tahay sababta dhalinyarta dahabiga ah ee qaan-gaarka ah ee aad u xun, xiisaha iyo wareerka? Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan maskaxda dhalinyarada.